သြဂုတ်လ 2014 |4၏စာမျက်နှာ 32 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » သြဂုတ်လ (စာမျက်နှာ 4)
လစဉ်မော်ကွန်း: သြဂုတ်လ 2014
PESA ကိုအမေရိကန်ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီများ၏ Long-Term Support Continues, နယူး GSA အတွက်စာချုပ်ချီးမြှင်
Huntsville, Alabama - PESA, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, ယနေ့ကသြဂုတ်လ 1 ထိရောက်သောအသစ်တစ်ခု GSA အတွက်စာချုပ်ချီးမြှင့်ထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ ဒါဟာကုမ္ပဏီရဲ့ဒုတိယ GSA အတွက်စာချုပ် (ပထမ 20 နှစ်ပေါင်းတက်ကြွကျန်ရစ်) ဖြစ်ပြီး, နောက်ဆုံးပေါ်ဆုကာကွယ်ရေး, နာဆာ၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ PESA ကို enable ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် ...
ပထမအချိန်များအတွက် IBC မှာ Spotlight ကိုသို့ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းခြေလှမ်းများ
အသံထုတ်ကုန်များမှကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်သည်ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ AMSTERDAM, AUGUST 27, 2014 - အသံစက်များမှမစ်ရှင်ဝေဖန်ထားသောဗီဒီယိုထုတ်ကုန်များ၊ ယခုနှစ်ပြပွဲတွင် IBC ပွဲ ဦး ထွက် (Hall 8, Stand B59) ။ Sound Devices သည်၎င်း၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုထုတ်ကုန်များဖြစ်သောကင်မရာဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည့် PIX 240i နှင့် PIX 220i တို့ကိုမိတ်ဆက်စဉ်ကတည်းကကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အောင်မြင်မှုအတွက် ...
Pronology ၎င်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု SaaS စှမျးအတူသတ်မှတ်မည်တိုက်ရိုက် Tapeless Workflows ဆောင်ကြဉ်း
AMSTERDAM, AUGUST 26, 2014 —Prnology, ခေတ်မှီ tapeless လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်သူ, ၎င်း၏ပြည့်စုံပေါင်းစည်းမှုနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအဖြစ် (SaaS) ကမ်းလှမ်းမှုများကို 2014 IBC Show (Hall 10, Stand AXNX) တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင်၊ အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများက၎င်းတို့ကိုတတ်နိုင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ် Pronology ကိုစာချုပ်ချုပ်နိုင်သည်။
ထုတ်လွှင့် @IBCShow လာဆုပေးပွဲ Beat! #IBC2014
အမြဲတမ်းအသံလွှင့်ဆုပေးပွဲအမ်စတာဒမ်အတွက် 2014 IBC Show ကိုမှလာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ် Beat ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်, သင်စတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ် www.broadcastbeat.com ဆောင်ခဲ့! ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM): "အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat" လယ်ပြင်၌တိုးတက်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ထူးခြားသောတီထွင်မှုများအဘို့သူတို့အားစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများသည် lauding အားဖြင့်လမ်းဦးဆောင်လမ်းပြနေဆဲဖြစ်သည်။ ...
Matrox 12 မှုကြီးကို Input / Output နှင့်အတူကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာ SDI Card များကိုကြေညာ
Matrox X.mio3 FH နှင့် DSX LE4 FH ကတ်များ AES / EBU, LTC, GPIO နှင့် optional ကိုအဆင့်မြင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအပြောင်းအလဲနဲ့Matrox®ဗီဒီယိုများအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ 4K မှ SD ကထဲကနေ developer များ Multi-ရုပ်သံလိုင်း I / O ပေးယနေ့ Matrox X.mio3 FH နှင့် DSX ထုတ်ပြန်ကြေညာ LE4 FH SDI ကတ်များ Matrox DSX ™ရေးသားသူထုတ်ကုန်များ၏နောက်မျိုးဆက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ အဆိုပါဝက်အရှည် PCIe ကတ်များ 12 မှုကြီးကိုမှတက်ကမ်းလှမ်း ...
အလန်ဒစ်ခ်အသံလွှင့်ဟိုင်း-ကိုယ်ရေးဖိုင်လူငယ်ကဏ္ဍ၏လိုအပ်ချက်များကျေနပ် DAB စနစ်များဖွံ့ဖြိုး
IBC Stand 8.B99 ADBL ၏ Stand Technology သို့အလည်အပတ်သွားရန် IBC Stand 8.B99 Gloucestershire, United Kingdom - ကမ္ဘာ့ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းတွင် ဦး ဆောင်သူ Alan Dick Broadcast Ltd. (ADBL) မှမီးအလင်းရောင်ပြလိမ့်မည်။ ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အင်တင်နာများသည် IBC တွင် DAB အင်တင်နာများကိုမီးမောင်းထိုးပြမည်ဖြစ်ပြီး ...
အဆိုပါ Barker အတ္ထုပ္ပတ္တိကို Join
exuberant လူနေမှုပုံစံစတဲ့အလုပ်အတွက်အထူးပြုခင်ပွန်း-and ဇနီး directing အဖွဲ့ကြော်ငြာနှင့်အမှတ်တံဆိပ် content များအတွက်အမျိုးသားရေးကိုယ်စားပြုမှုရရှိမညျဖွစျသညျ။ ဇာတ်လမ်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လျှောက်လုံးစီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာစီမံကိန်းများအတွက်အဘို့ထိုသူတို့ကိုယ်စားပြုရန်, ခရစ်နှင့် Kristen Barker က The Barker အဖြစ်လူသိများသည့် Multi-ပါရမီ, ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးဖန်တီးမှုအသင်းနှင့်အတူသဘောတူညီချက်သို့ဝငျခဲ့သညျ။ ချီကာဂိုအခြေစိုက် Duo, အဘယ်သူ၏အလုပ်သည် Microsoft, Kraft အဘို့ဖန်တီးမှု auteurs ရှိပါတယ် ...
လုပ်ရန်စားသုံးမိ Matrox VS4 နှင့် MXO2 ဘုတ်အဖွဲ့ထောက်ပံ့! ဟူစတန်-TX, လုပ်ရန်ကြီးထွားလာရပ်တန့်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်! ယခုမှာယင်း၏အထောက်အကူ Matrox I / O Device များ။ Matrox VS4 ပေါင်းစုံရုပ်သံလိုင်းစားသုံးမိဘို့ PCI ဖမ်းယူကဒ်ဆက်ကပ်အပ်နှံတစ်4HD ကို / SDI input ကို4ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Matrox MXO2 HD ကို / SDI, Analog စ, HDMI သွင်းအားစုများနှင့် ExpressCard / 34, Thunderbolt (Mac အတွက်သာ) သို့မဟုတ် PCIe ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူခရီးဆောင် I / O device ကိုဖြစ်ပါတယ်။ စားသုံးမိနှင့်အတူ MXO2 ...
4 ၏စာမျက်နှာ 32«ပထမဦးစွာ...«23456 » 102030...နောက်ဆုံး»